नक्कली सेलिब्रिटीबाट काे काे ठगिए ? फेसबुकमा यस्ताे...
चैत ३, २०७६, सोमबार
काठमाडाैं । चितवनकी भगवती गैरे भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चनको एकदमै ठूलो फ्यान हुन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा खाता खोलिसकेपछि उनले त्यहाँको सर्च इन्जिनमा सबैभन्दा पहिले उनै बच्चनको नाम लेखिन्। फेसबुकमा सयौँ अम...
भारतमा सबै फिल्म, सीरीयलको शुटिङ बन्द
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि भारतमा फिल्म, सीरियलको शुटिङ स्थगित गरिएको छ। आइतबार बसेको इन्डियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्युसर्स एसोसियसन (आईएमपीपीए) को बैठकले १९ मार्चदेखि ३१ मार्चसम्म सम्पूर्ण फिल्...
दीपिका पादुकोणले पूर्व प्रेमीलाई रंगेहात भेट्टाएपछि...
काठमाडाैं । बलिउडकी चिर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले आफ्ना पूर्व प्रेमीलाई रंगेहात भेट्टाउँदा पनि आफुले उसलाई माफी दिएको खुलासा गरेकी छन् । हालै दीपिकाले दिएको एक अन्तरवार्तामा उनले उनले नखुलाई आफूले रंगे...
‘क्याप्टेन’की अभिनेत्री प्रियंकाले काे सँग गरिन् इन्गेजमेन्ट?
चैत २, २०७६, आइतबार
काठमाडौं । अनमोल केसी अभिनित फिल्म ‘क्याप्टेन’बाट अभिनयमा डेब्यु गरेकी अभिनेत्री प्रियंका एमभीले इन्गेजमेन्ट गरेकी छन् । उनले प्रेमी सफल अधिकारीसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी हुन्। इन्गेजमेन्ट समारोहमा दुबै पक्...
सुतिरहेका आमिरसँग करीनाको सेल्फी, यस कारण भइरहेको छ भाइरल
काठमाडौँ । करीना कपूरले शनिबार अमिर खानको ५५ औँ जन्मदिनका अवसरमा सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा सुपरस्टार एउटा तस्वीर शेयर गरिन्। उक्त तस्वीर अहिले निकै भाइरल बनेको छ। तस्वीरमा करीनाले तकिया समातेर सुतिरहेक...
पहिलो कमेडी च्याम्पियन बनेपछि हिमेश पन्तले लेखे यस्तो स्टाट्स
काठमाडौँ। हिमेश पन्त नेपालको पहिलो कमेडी च्याम्पियनमा विजेता बनेका छन्। यो सँगै उनले २५ लाख नगद र कार हात पारेका छन् । शनिबार काठमाडौँमा भएको ग्रान्ड फिनालेमा भोटिङका आधारमा हिमेश उत्कृष्ट घोषित भएका ...
आँचल शर्माले गरिन् विवाहका तस्वीर सार्वजनिक, लेखिन् यस्तो स्टाट्स
काठमाडौँ । नायिका आँचल शर्मा र उनका प्रेमी डाक्टर उदिप श्रेष्ठ फागुन २९ गते विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन्। हिन्दू परम्परा अनुसार आँचल र उदिपले बुढानिलकण्ठस्थित होटल पार्क भिलेज रिसोर्टमा बिबाह गरेका हुन्।...
पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गीको डिभोर्स, रुदै आइन् मिडियामा
काठमाडौँ । पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी र सञ्चारकर्मी जीपी तिमिल्सिनाको वैवाहिक जीवन सम्बन्ध विच्छेदको स्थितीमा पुगेको छ। यस बारेमा उषा आफैँले मुख खोलेकी छिन्। उषाले उषाले शनिबार राती सामाजिक सञ्जाल फेस...
कपिल शर्माको 'शो' मा पुग्यो प्रहरी
चैत १, २०७६, शनिबार
बलिउडका चर्चित कमेडिन कपिल शर्माको शो द कपिल शर्मा शो निकै चर्चित शो का रुपमा परिचित छ। आगामी शो मा मुंबई पुलिसको इन्ट्री देख्न पाइने छ। यो पटक सूर्यवंशी फिल्मका कलाकारको उपस्थिती रहनेछ। शो मा अक्षय ...
कमेडी च्याम्पियनको दोस्रो एपिसोड पनि छिट्टै आउने
काठमाडौँ । कमेडी च्याम्पियनको फिनाले आज सकिएको छ। पहिलो एपिसोडको सफलतासँगै यो टिमले अर्को एपिसोड पनि छिट्टै ल्याउने भएको छ। पहिलो एपिसोडको विजेता धादिङका हिमेश पन्त बनेका छन्। उनी अडिसनमा सामेल ८...
धैर्य र संयमित भई ‘लकडाउन’को पालन गर्न आग्रह
सुदुरपश्चिममा कोरोनाको व्यापक परिक्षण गर्न देउवाको आग्रह
लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई गोली ठोकेर मारियो
मुख्यमन्त्री पोख्रेलद्वारा दुई प्रदेश र भारतीय सीमावर्ती पालिका प्रमुखसँग एकीकृत भिडियो सम्वाद